हे दैव! कसैलाइ पनि नहोस् यस्तो… – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > हे दैव! कसैलाइ पनि नहोस् यस्तो…
admin November 21, 2020 November 21, 2020 जीवनशैली, समाज	0
शुक्रबार दिउसो उनी मायामेट्रो हस्पिटलमा भुइतलामा भित्र बाहिर गर्दै थिइन । काखमा दुधे बालक रुदै दुध चुसिरहेको थियो । उनका आँखाबाट आँशुका बलिन्द्र धारा बगेका बग्यै थिए । घाँटीमा चोट लागेको छ । राम्ररी हल्लाउन सक्दिनन् । सँगै आएका श्रीमान कहाँ छन् उनलाइ केही थाहा छैन ।बैतडीको पाटनमा केही बेर रोकिएपछि बस खोड्पेको उकालो चढ्न थाल्यो । राति दस बज्नै लागेको थियो । यात्रु कोही सिटमै निदाउँदै त कोही झकाउँदै थिए ।
होस खुलेपछि उनले वरिपरि हेरिन् । बच्चा नजिकै रोइरहेको थियो । उसको टाउकोबाट रगत बगिरहेको थियो । उसलाई झटपट काखमा च्यापिन् । अनि पतिलाई खोज्न थालिन् । घटनास्थलमा कोलाहल मच्चिरहेको थियो । घाइतेहरू रोइ–कराइ गरिरहेका थिए ।केही बेरमा उद्धार टोली आएर विमलालाई सडकसम्म ल्यायो ।
अहिले उनीसँगै बच्चालाई उपचारका लागि धनगढीको मायामेट्रो अस्पताल ल्याइएको छ । अस्पतालको शय्याबाटै उनी ‘मेरो श्रीमान् खोइ’ भन्दै खोधखोज गरिरहेकी छन् । तर, उनलाई आफन्तले भन्न सकेका छैनन्– श्रीमान् करनसिंह ऐरीको घटनास्थलमै मृत्यु भइसकेको छ । दु्र्घटनामा घाइते भएका पुरन टमाटा माया मेट्रो अस्पतालमा । आफन्तका अनुसार करनसिंहको शव विमला अड्किएको ठाउँभन्दा करिब २ सय मिटर पर भेटिएको थियो ।
उनी बसमुनि च्यापिएका थिए । बसमा खराबी आएको भनेर केही बेर पाटनमा रोकिएको पनि थियो । त्यसको केही समयपछि नै दुर्घटना भएको हो । ‘तिहार माइती घरमा भाइटीका लगाउने विमलाको सपना अधुरो मात्रै रहेन श्रीमानको सपना पनि अधुरै रह्यो । काठमाडौं बस्ने गरी आउँदै थियौं,’ उनले भनिन्, ‘लोकसेवाको तयारीसँगै जागिर पनि खोज्ने श्रीमान्‌को योजना थियो ।’ उज्यालो सन्देशबाट
कस्तो अचम्म ! प्रेमिका मिलाउनेलाई २८ लाख पुरस्कार दिने घोषणा